Kushone abangu-8 kuqhuma ifemu kakhilikithi | News24
New Delhi — Ukuqhuma okwenzeke efemini ebisebenza ngokungemthetho yakha ukhilikithi, kubulale abantu abangu-8 kwathi abanye abangu-20 balimala njengoba abenkolo yamaHindu bebegubha uDiwali, kusho amaphoyisa ngoLwesine.
Owamaphoyisa uthe abatakuli basuse izingcucu zaleli bhilidi elibhidlikile ngemuva kokuqhuma okwenzeke edolobheni elisesifundeni iBalasore, e-Orissa, ngoLwesine ekuseni.
Abantu abayisikhombisa abalimele baphuthunyiswe esibhedlela kwathi laba abanye bathola usizo lwezempilo base beyagodukiswa. Le ndawo okwenzeke kuyo isigameko iqhelelene ngamakhilomitha angu-195 neBhubaneshwar.
Umphathi waseBalasore, uPramod Kumar Das, uthe lokhu kuqhuma okukhulu kwenzeke ngoLwesine abasebenzi bematasa bekhiqiza ukhilikithi emzini obusetshenziswa njengefemu, ngokusho kombiko wePress Trust of India.
OLUNYE UDABA: Kuxwayiswa ngokhilikithi ngobusuku bukaNcibijane
Iziphathimandla ziyaphenya ngembangela yalokhu kuqhuma.
Ukuqhuma okuyingozi kuvamile emafemini aseNdiya asebenza ngokungekho emthethweni ngenxa yokuthi esikhathini esiningi abanikazi bayishaya indiva imibandela yezokuphepha.
Ukuqhumisa ukhilikithi kuyinto eyejwayelekile kuleliya lizwe njengoba kuyingxenye yemigubho kanye nemishado eNdiya.
NgoJuni, kwaba nokuqhuma kwenye ifemu yamakhilikithi kwashona abantu abangu-23 kwathi abayisikhombisa balimala eMadhya Pradesh, enkabeni yeNdiya.